घरको संरचना, परिवारको कचकच र बोधो दिमाग पनि बालविवाहको कारण ! – Himal FM 90.2 MHz
घरको संरचना, परिवारको कचकच र बोधो दिमाग पनि बालविवाहको कारण !
स्थानीय समाचार adminhimal October 25, 2018
पछिल्लो समय नेपाली समाजमा वालविवाह बाक्लिदैछ । कतिपयले परिवारकै दबाबमा त, कतिले व्यक्तिगत कारणले पनि सानै उमेर विवाह गर्न बाध्य बनेका छन् । सामाजिक संरचनाकै कारण पनि वालविवाहलाई प्रसय मिल्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् । एक रिर्पोट
सोलुखुम्बु छेस्कामका चतुर कुलुङले कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा विवाह गर्नुभयो । त्यतिबेला कुलुङ उमेरले १९ बर्ष र उनको श्रीमति १७ बर्षको । विद्यालय समयमै मायाप्रेम झाँगिएपछि अन्जानमै विवाह बन्धनमा बाँधिए उनीहरु । यो जोडीलाई बालविवाह भन्ने बर्षौपछि थाहा भयो । विवाह भएकै एक दशक पुग्यो । खुल्ला समाज र संगतले गर्दा पनि बालविवाह र सानै उमेरमा गर्भवति हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने चतुर कुलुङको बुझाई छ ।
भविष्य प्रति चिन्ता नगरि सानै उमेरमा विवाह गरेकाहरु जीवनमा पक्कै पछुताउछन् । यहि भोगाई छ, चतुर कुलुङको । उहाँले विवाह पछि भविष्यको योजना निर्माण र परिवार व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
बाहविवाह बढि हुने क्षेत्र भनेर चर्चा हुने गुदेलमा पहिलेको तुलनामा सानै उमेरमा हुने विवाह पातलिदै गएको सामाजिक अगुवाहरुको बुझाई छ । तर निमिट्यान्न भने भएको छैन् । अझैपनि पढाईमा कमजोर मानिएका विद्यार्थीहरु सानै उमेरमा विवाहको बाटो रोज्ने गरेको गुदेल माविका प्रध्यानाध्यापक लव कुमार राईको भनाई छ ।
घरको संरचना र खुल्ला समाजले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नमा प्रसय पो गरिरहको छ की भन्ने कोणवाट पनि तर्क हुन थालेको छ । माहाकुलुङ क्षेत्रका सामाजिक अगुवा पर्खि नाछिरिङ राईहरुको घरको संरचनाले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नका लागि बल दिईरहेको बताउनुहुन्छ ।
कतिपयले सुरक्षित यौनसम्पर्कको साधन र प्रयोगका बारेमा थाहा नपाउदा बसेको गर्भको कारण पनि विवाह गर्नै पर्ने वातावरण बन्ने गरेको बताउने गरेका छन् । बर्षेनी हुने बाहविवाहको बारेमा कुनैपनि निकायसंग यकिन तथ्यांक नभएपनि सानै उमेरमा हुने विवाहलाई कम गर्नका लागि माहाकुलुङ गाउँपालिकाले सार्थक कदम चाल्ने तयारी थालेको छ ।